Pearl S. Buck zuva rekuzvarwa. Biography uye basa. | Zvazvino Zvinyorwa
Pearl S. Buck zuva rekuzvarwa. Biography uye basa.
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Novela
Nhasi, Chikumi 26, chirangaridzo chitsva che kuberekwa kubva kumunyori weAmerica Pearl S. Buck. Akapedza chikamu chakanaka chehupenyu hwake mu China uye nokudaro basa rake rakakanganiswa zvakanyanya neve sagas uye tsika yekumabvazuva. Akagamuchira mubairo Nobel en 1938.
Kwandiri Pearl S. Buck ndeye munyori werondedzero izvo zvakakurudzira rimwe rebasa rangu rakazvininipisa repachivande. Saka Ini ndinoongorora mamwe emabhuku ake, mabhuku anga ari pamba kubva pandinoyeuka.
Zita rake rakazara raive Pearl Sydenstricker Buck uye akazvarwa muHillsboro muna 1892. Mwanasikana wemamishinari ePresbyterian, aigara muAsia kusvika 1933. Buck aishanda akamiririra kodzero dzevanhukadzi uye dzevakadzi uye vakavaka iyo Welcome House, yekutanga yekune dzimwe nyika uye tsika dzakasiyana-siyana dzekurera vana.
1 Kutanga kushanda
2 Mamwe mabhuku enganonyorwa nenyaya pfupi
4 Anoda nyika
5 Vamwe vamwari
6 Rufu munhare
7 Pakupedzisira, kushamisika kusingaperi
Nhoroondo yake yekutanga yaive Mhepo yekumabvazuva, mhepo yekumadokero (1930), iyo yakateverwa Nyika yakanaka (1931), yakaiswa muChina yema20. Yaive budiriro huru yakakosha yakazoitisa kuti ihwine Mubayiro wePulitzer. Iyo yakazara zvakakwana uye yakazara nhoroondo yeChina tsika. Inofungidzirwa seimwe yehunyanzvi hwezana ramakore rechi1937. Yakagadziriswa kune iyo cinema muna XNUMX.
Nyika yakanaka ndicho chikamu chekutanga chetatu chakapedzwa ne Vana (1932) uye Imba yakakamurwa (1935). Mariri, iyo yechinyakare theme yechiChinese inochengetedzwa kuburikidza nemamiririri matatu enharaunda: murombo, murwi uye mudzidzi.
Vashanduki, vatengesi, varimi, uye makosi anoonekwa mumazita ese matatu. Ivo vanoratidza nharaunda dzakasiyana dzakatenderedza iyo Wang Lung mhuri, nezvake kunetswa kwehukama hwehukama kusvika kudzikira kwake kwekupedzisira kunotaurwa. Mavambo akaoma nematambudziko ekuchengetedza mari uye mawaniro avanowana hupfumi hwavo mukati mekukwira nekudzika kwemaitiro emabourgeois uye nemanzwiro.
Mamwe mabhuku enganonyorwa nenyaya pfupi
Gare gare muna 1934 akaburitsa Amai uye mu1942 Mujaho weshato, imwe nganonyorwa kwaakatsigira kurwira kweChinese kurwisa impiriyasi nekutapa kweJapan. Iyo nyaya yenyaya yemhuri yevarombo inogara padyo neNanking. Iyo firimu vhezheni yakaitwa muna 1944 kunyangwe isina budiriro yakawanda, asi chiri chishuwo chekuona mutambi wekumadokero aine maziso akatsvedza, saKatharine Hepburn.
Pearl S. Buck akanyora zvakare akawanda tales, yakanyorwa pasi pemusoro wenyaya Mudzimai wekutanga. Ivo vanorondedzera shanduko dzakadzama munharaunda uye nehupenyu munyika yavo yekugara. Idzo nyaya hombe dzavanobata nadzo kupokana pakati pechinyakare China nezvizvarwa zvitsva, uye zvakasikwa zvizere nesimba uye utopia yeanomukira echikominisiti.
Iyi novel inodzokorora zvakakwana iyo Chinese vanhu vanorwa nemaJapan. Mariri tinowana varimi, vatengesi, magandanga, vadzidzi uye vematare. Mune ino akasiyana masosi eruzhinji, kwete asina zvishuwo, mavara e murimi ling tan, zvevana vake, uye nezvevakanaka Mayli. Ivo vaviri vanozoona mutambo mune iyo yechokwadi neyerudo zvakasanganiswa, uye ese mativi ari kufamba zvakafanana.
Iyo inyaya yehupenyu muChina neJapan mukati memakore akanyanya kuchinja. Inotanga ne mudzidzi chimurenga uye inopera mumakomo emukati meChina, muchikamu chakaomesesa uye chakaomesesa chekurwa nemupambi weJapan Asi zvakare iri rudo rukuru.
Iri bhuku rinotaurira nyaya ye mukadzi anoroora murume ane mukurumbira, mutambi wemuAmerica, chidhori cheruzhinji. Asi muchokwadi uye muchivande, murume uyu anongova facade, wimp isina hunhu. Nekudaro, mukadzi wake anomuda uye anoda chivande chokwadi chekubiridzira ndiye murume wake. Mubvunzo ndewekuti unozobudirira here kana kuti kwete.
Netoni ye kufungidzira uye kurangana, bhuku iri zvese zviri zvishoma kuwana uye imwe yeiyo mabasa mazhinji akaitwa rakanyorwa naPearl S. Buck.
Vamwe vekuAmerican vanoda kutenga yeXNUMXth century English castle kuti vaendese kuConnecticut. Asi dzimba dzemuzinda a Chakavanzika izvo varidzi vadzo havadi kuzivisa. Asi vese avo vanofarira kuitenga uye vashanyi vakatsunga kuiwana.
Pakupedzisira, Chishamiso chisingaperi
Yakanyorwa mukati 1973, kumagumo kwehupenyu hwake, akaramba akavanda kusvika munguva pfupi yapfuura. Yakawanikwa muTexas imba yekuchengetera imba uye yakatsikiswa sechiitiko chikuru chekutsikisa. Icho chiri nyaya yerudo uye yaonekwa seye rakawanda rakavanzika uye rinoda basa yemunyori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Pearl S. Buck zuva rekuzvarwa. Biography uye basa.
Nhasi kunopemberera makore makumi maviri ekuberekwa kwaHarry Potter
10 mazwi pamusoro pegungwa anowanikwa mune zvinyorwa